Tababar Lagu Xoojinayay Hirgalinta Ciidanka Horumarka Caafimaadka Oo Ka Dhacay Jigjiga - Cakaara News
Tababar Lagu Xoojinayay Hirgalinta Ciidanka Horumarka Caafimaadka Oo Ka Dhacay Jigjiga
Jigjiga(cakaaranews),talaado, 8da November, 2016. Tababar uu soo diyaariyay xafiiska caafimaadka DDSI oo ay ujeedadiisu ahayd xoojinta iyo hirgalinta ciidanka horumarka adeega caafimaadka ee maamulka magaalada jigjiga ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI.
Tababarkan oo loo qaybtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafadaha maamulka magaalada jijiga ayaa waxaa furitaankiisii ka soo qaybgalay masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka xafiiska caafimadka DDSI , mudane xasan ismaaciil, wasiirka arimaha haweenka iyo caruurta DDSI marwo raxma suldaan maxamuud haybe iyo maayirka maamulka magaalada jigjiga mudan Axmed maxamed.
Waxaana tababarkan ugu horayntii ka hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudan Xasan Ismaaciil Cali oo sharax dheer ka bixiyay ahmiyada uu leeyahay tababarkani. Wuxuuna sheegay in uu tahay tababar ku salaysan xoojinta ciidanka horumarka caafimaadka kaasi oo ka qayb-qaadan doona xaqiijinta fidinta adeega caafimaadka maamulka magaalada jigjiga. Wasiirka ayaa ku buuriyay qaybaha kala duwan ee bulshada loo qaybtay tababarkan in ay cashirada ay ku qaataan tababarkan ku xoojiyaan hirgalinta ciidanka horumarka adeega caafimaadka ee maamulka magaalada jigjiga.
Dhankooda wasiirka arimaha haweenka iyo caruurta DDSI marwo raxma suuldaan maxamuud haybe iyo maayirka maamulka magaalada jigjiga mudan axmed maxamed oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay cudud caafimaad oo hirgalinta ciidanka horumarka caafimaadka iyada oo xooga la saarayo hirgalinta 16 xidhmood ee adeega caafimaadka. Waxayna sheegeen in qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb-gashay tababarkan marka uu dhamaado laga samayn doono gudiyo kala duwan oo hirgaliya ciidanka horumarka caafimaadka ee maamulka magaalad jigjiga.